Waa Mas Khaa'in Ah, Ma Doonayno Beenaalaha- Jamaahiirta Liverpool Oo Sterling Furka Ku Tuuray Iyo Falcelintii Jamaahiirta Man United. - Gool24.Net
Waa Mas Khaa’in Ah, Ma Doonayno Beenaalaha- Jamaahiirta Liverpool Oo Sterling Furka Ku Tuuray Iyo Falcelintii Jamaahiirta Man United.
Taageerayaasha kooxaha Liverpool, Manchester City iyo Manchester United ayaa ka falceliyay hadalkii uu Raheem Sterling sida layaabka leh ugu qirtay in uu dib ugu laaban karo Liverpool isla markaana ay wali Reds qalbigiisa ku jirto.
Raheem Sterling ayaa maanta oo kale siddeed sanadood ka hor waxa uu saftay kulankiisii ugu horeeyay ee kooxda kowaad ee Liverpool, wuxuuna waraysi uu bixiyay ku sheegay hadal dad badan lama filaan ku noqday oo uu ku qirtay sida uu wali Liverpool u jecel yahay.
Laakiin hadalkan ayaa mashquul badan ka abuuray baraha bulshada gaar ahaan twitterka iyada oo siyaabo kala duwan ay taageerayaasha kooxaha Manchester City, Liverpool iyo Man United ay uga falceliyeen hadalkan.
Waxaa suurtogal ah in aad is waydiinayso sababta ay taageerayaasha Man United ku soo galeen falcelintan maadaama oo la fahmi karo in taageerayaasha Liverpool iyo Man City ay gar u leeyihiin in ay falcelintooda muujin karaan.
Raheem Sterling ayaa hore u sheegay in uu soo ahaan jiray taageere Manchester United ah, waxayna taasi keentay in su’aal la galiyo daacadnimadiisa maadaama oo uu u soo ciyaaray kooxaha Man United ugu xifiltanka badan yihiin balse uu sidoo kale qaab xun kaga baxay Liverpool oo uu hadda qirtay haddana in uu ku soo laaban karo.
Aan marka hore qaybta hadalka Raheem Sterling ee dareenka badan abuurtay idin soo gudbiyo haddii aanad hore u arag wuxuuna yidhi: “Miyaan waligay dib ugu soo laaban doonaa Liverpool? Haddii aan daacad idiin ahaado, anigu waxaan jeclahay Liverpool. Iyagu qalbigayga ayay ku jiraan, waa koox wax badan aniga ii qabtay in aan sidaa u koray”.
Laakiin inta ugu badan taageerayaasha Liverpool ayaa diidmo cad u muujiyay jacaylka Raheem Sterling waxayna ku tilmaameen mas khaa’in ah oo aan hadda kooxdooda boos ka helayn, waxayna sheegeen in haddii uu isagu wali kooxdooda jecel yahay in ayna iyagu jeclayn isaga.
Inkasta oo ayna marnaba suurtogal ahayn in la soo koobi karo falcelinta badan ee ay taageerayaasha kala duwani ka muujiyeen hadalka Sterling, haddana qaybo ka mid ah ayaanu halkan idiinku soo koobnay.
Taageere ayaa soo qoray: “Waa taageere Man United ah, waxa uu u soo ciyaaray Liverpool, mas ayuu ku noqday Liverpool oo uu City u wareegay, wali waxa uu jecel yahay Liverpool”.
“Waxaan rajaynayaa in aanan anigu doonayn in uu maskaasi kooxda ka soo ag dhawaado” ayuu taageere Liverpool ahi soo qoray.
Taageere kale oo Liverpool ah ayaa sharaxaad badan bixiyay wuxuuna soo qoray: “Markii uu isagu joogay Liverpool waxaa ka go’anayd in uu baxo. Waxa uu tagay Man City, waxa uu sheegay in uu taageere Man United ah yahay isla markaana uu jecel yahay Liverpool- maxay tahay sababta uu qof kastaaba isaga u necel yahay?”.
Mid kale oo Liverpool taageere u ah ayaa aaminsan in xataa haddii uu Sterling ku soo laabto Liverpool aanu shaxda Klopp ku soo bixi doonin wuxuuna yidhi: “Haddii uu isagu soo laabto, saddexdayada weerarku waxay noqon doonaan Mane, Firmino iyo Salah”.
Taageere kale oo Liverpool oo fikirkiisa dhiibanaya ayaa isna soo qoray: “Waxa uu isagu u soo ciyaaray labada kooxood ee xifiltanka ugu wayn ku ah United, qodobo xun ayuu Liverpool kaga baxay, Liverpool ayuu duray markii uu xili ciyaareedkii hore abaal marinta ku guulaystay, waxa uu u iljabiyay Real Madrid isaga oo Man City u ciyaara- Kaasi waa Sterling-kiina”.
Taageere kale oo Liverpool ah oo cadhaysan ayaa soo qoray: “Beenaale cadaan ah, waxa uu sheegay in aanu qofna doonayn in Liverpool ay horyaalka ku guulaysato, waxa uu u dhaqmay sidii oo ay waxa ugu xun tahay haddii ay taasi kubbada cagta ku dhacdo, laakiin hadda wuu na jecel yahay miyaa?. QASHIN”.
“Waa hagaag, anagu qalbigayaga isaga kuma hayno, sidaa daraadeed waad tagi kartaa F**k Off” ayuu taageere kale oo Liveprool ahi soo qoray”.
Taageere Man United ah ayaa isna soo qoray: “Waa taageere Man United ah oo u ciyaara City, kaas oo qalbigiisa ku haysta Liverpool. Waligay ninkan sidan oo kale ah maan aaminin anigu”.
“Waa taageere United ah oo qalbigiisa ku haysta Liverpool laakiin u ciyaara City- wuu u dhexeyaa” ayuu taageere kale oo United ahi soo qoray.
Isla fikir kale oo aan kaas ka fogayn ayuu taageere kale oo Man United ahi soo qoray: “Taageere United ah oo u ciyaaray City iyo Liverpool, ninkani daacadnimo ma laha”.
“Isagu in ku filan uma fiicna, anigu waxaan ahay taageere United ah kaas oo neceb Liverpool” ayuu taageere kale oo Man United ahi soo qoray.
Taageerayaasha Man City ayaan marnaba jeclaysan hadalka uu Raheem Sterling albaabka ugu furay in uu Liverpool ku laaban karo waxayna abuuraysaa walwal ah in uu haddaba sii raadsanayo koox uu xagaaga ku biiri karo haddii City laga soo diido rafcaanka ganaaxa Champions League laga saaray labada xili ciyaareed ee soo socda.
Sawiro, muuqaalo iyo qoraalo aan tiro lahayn ayay taageerayaasha kala duwani kaga falceliyeen hadalkii ka soo yeeshay Raheem Sterling ee uu albaabka ugu furay in uu Liverpool ku soo laaban karo iyo jacaylka uu sheegay in uu wali qalbiga ugu hayo Reds.